OLAN’NY ANGOVO SY NY RANO : Nesorina ny tale jeneralin’ny Jirama Olivier Jaomiary
Nilatsaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra, izay notanterahina ny alarobia 14 aogositra lasa teo ny didim-panjakana manala amin’ny toerany ny tale jeneralin’ny orinasa jirama, Olivier Jaomiary. 16 août 2019
Ny didim-panjakana laha : 2017-296 ny volana avrily taona 2017 no nametraka azy teo amin’io andraikitra noraisiny io, izay nofoanana avy hatrany taorian’ny tolo-kevitra nomen’ny minisitry ny angovo, ny rano ary akoran’afo. Heverina ho tsy nahavaha ireo olana marobe nifamaofao manodidina ny famatsian-jiro sy herinaratra teto an-drenivohitra sy ny Faritra maro manerana ny Nosy ity tale jeneralin’ny orinasa Jirama ity. Tranga tamina Faritra maro no nisehoana korontana sy hetsi-bahoaka noho ny fahatapatapahan’ny herinaratra lavareny.
Tato anatin’ny roa herinandro nifanesy ihany koa izay dia niteraka olana goavana teto an-drenivohitra ny tsy fisian-drano. Faritra maro manerana ny renivohitra no mikaikaika noho ny fahatapahan-drano. Nisy mihitsy ireo nanao fihetsiketsehana vokatr’izany tahaka ny teny Ankatso. Manoloana ireo tranga rehetra ireo anefa dia nandrenesam-panazavana mihitsy ny teo anivon’ny Jirama. Nosafosafoina fotsiny tamin’ny hoe, fotoanan’ny main-tany izao ka sarotra ny fampiakaran-drano. Na izany anefa ireo vahoaka miandrandra fanazavana mafonja ary andrasan’izy ireo fatratra ny fe-potoana hahataperan’io fijalian-drano io saingy tsy nisy izany. Nifanindran-dalana tamin’ireo olana marobe ireo indrindra no nilatsahan’ny didy manala ny tale jeneralin’ny jirama, Olivier Jaomiary amin’ny toerany.
Ankoatra izay raha tsiahivina ny volana marsa lasa teo iny dia efa nisy ny fitokonana nataona sendika iray teo anivon’ny orinasa jirama. Efa notakin’izy ireo tamin’izany ny hanala an’ ity tompon’andraikitra voalohany ity amin’ny toerany. Antony vitsivitsy no voalazan’izy ireo ho anton’izany dia ny fandroahana mpiasa amin’ny tsy ara-drariny ary ny fanohizana hatrany ny fiaraha-miasa amin’ireo orinasa tsy miankina. Nambaran’ny mpitarika an’ity sendika ity tamin’izany fa io fiaraha-miasa amin’ny orinasa tsy miankina io no anisany mamono an-kolaka ny orinasa jirama. Voalaza fa vola tsy toko tsy forohana no aloan’ny jirama amin’ilay orinasa tsy miankina kanefa tsy hita mazava akory izay vokatr’izany. Andrasana indray araka izany ny fanendrena izay ho tale jeneraly vaovao hitantanana ny Jirama. Ny tena andrandrain’ny vahoaka Malagasy ny hanafoana ny delestazy sy ny hahatomombana ny famatsian-drano.